When can you start to lose weight after childbirth? – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
When can you start to lose weight after childbirth?
” မီးဖှားပွီး ဘယျလောကျအကွာမှာ ဝိတျပွနျခမြလဲ?”
အပြိုတုနျးကလို ခန်ဓာကိုယျလေးပွနျရဖို့ဆိုရငျ ၆လ၊၁နှဈတော့ အနညျးဆုံး စောငျ့ရပါလိမျ့မယျ မမေတေို့ရေ။ဝိတျခရြာမှာလညျး အစားအသောကျဆငျခွငျခွငျးနဲ့ အားကစားလုပျခွငျး….ဒီလိုကနျြးမာရေးနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ နညျးလမျးမြားကိုသာသုံးသငျ့ပွီး၊ပိနျဆေးမြားသုံးစှဲခွငျးကို လုံးဝရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျနျော။
ဘယျအခြိနျလောကျကစပွီး ဝိတျခလြို့ရပွီလဲဆိုရငျ …နို့ဘူးတိုကျတဲ့ မမေတေို့အနနေဲ့ မီးဖှားပွီး ၆ပတျပွညျ့ပွီးလို့ ဆေးရုံရကျခြိနျးပွနျပွပွီး မိခငျရော ကလေးပါ ကနျြးမာရေးကောငျးတယျဆို စလို့ရပါပွီ။
မိခငျနို့တိုကျနတေဲ့ မမေတေို့ကတော့ ကလေး ၂လပွညျ့မှ စပါနျော။
စိတျရှညျဖို့တော့ လိုမယျနျော မမေတေို့ရေ…။အပျေါမှာပွောထားတဲ့ အခြိနျကာလထကျ ရှပေို့စောပွီး ဝိတျမခဖြို့ရယျ၊အစာရဆောဖွတျတောကျ…လကေ့ငျြ့ခနျးတှအေပွငျးအထနျလုပျပွီး အခြိနျတိုအတှငျး ပေါငျခြိနျအမြားကွီးကအြောငျ မကွိုးစားဖို့တော့ သတိပေးလိုကျပါရစနေျော။
ခုလို သတိပေးရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ မီးဖှားပွီးခြိနျဆိုတာမမေတေို့အတှကျ နလနျထစအခြိနျဖွဈတဲ့အလြောကျ ကောငျးစှာအနားယူပွီး အားအငျပွနျလညျ ဖွညျ့တငျးဖို့ လိုအပျတာကွောငျ့ပါ။
မဟုတျရငျ အငျအားပွတျလပျပွီး ကနျြးမာရေးထိခိုကျနိုငျလို့ပါ။နို့တိုကျမိခငျတှမှောဆို….ကလေးပါ အာဟာရခြို့တဲ့သှားနိုငျတယျလေ။သာမနျလူတှမှော တဈပတျကို ၂ပေါငျခတြာ ပုံမှနျပမေယျ့ မမေတေိူ့ကတော့ တဈပတျကို အမြားဆုံး ၁ပေါငျခှဲသာ လြှော့ခသြငျ့ပါတယျ။ညနစောမစားတာမြိုး…တဈနေ့ နှဈနပျလောကျပဲစားတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါဘူးနျော။အစားကို နညျးနညျးစီ ခဏခဏခှဲစားပွီး မနကျစာ နလေ့ညျစာ ညစာ သုံးနပျအပွညျ့စားလို့ရပါတယျ။ကွားထဲမှာလညျး အဆီမတကျမယျ့ သှားရစောလေးတှစေားပါ။အကောငျးဆုံးကတော့ ကြှမျးကငျြဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျပွီး စနဈတကြ ကိုယျအလေးခြိနျခဖြို့ တိုကျတှနျးပါတယျနျော။
ကနျြးမာလှပတဲ့ မိခငျဘဝ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
” မီးဖွားပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ ဝိတ်ပြန်ချမလဲ?”
အပျိုတုန်းကလို ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်ရဖို့ဆိုရင် ၆လ၊၁နှစ်တော့ အနည်းဆုံး စောင့်ရပါလိမ့်မယ် မေမေတို့ရေ။ဝိတ်ချရာမှာလည်း အစားအသောက်ဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ အားကစားလုပ်ခြင်း….ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းများကိုသာသုံးသင့်ပြီး၊ပိန်ဆေးများသုံးစွဲခြင်းကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်နော်။
ဘယ်အချိန်လောက်ကစပြီး ဝိတ်ချလို့ရပြီလဲဆိုရင် …နို့ဘူးတိုက်တဲ့ မေမေတို့အနေနဲ့ မီးဖွားပြီး ၆ပတ်ပြည့်ပြီးလို့ ဆေးရုံရက်ချိန်းပြန်ပြပြီး မိခင်ရော ကလေးပါ ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဆို စလို့ရပါပြီ။
မိခင်နို့တိုက်နေတဲ့ မေမေတို့ကတော့ ကလေး ၂လပြည့်မှ စပါနော်။
စိတ်ရှည်ဖို့တော့ လိုမယ်နော် မေမေတို့ရေ…။အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ အချိန်ကာလထက် ရှေ့ပိုစောပြီး ဝိတ်မချဖို့ရယ်၊အစာရေဆာဖြတ်တောက်…လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင်းအထန်လုပ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပေါင်ချိန်အများကြီးကျအောင် မကြိုးစားဖို့တော့ သတိပေးလိုက်ပါရစေနော်။
ခုလို သတိပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မီးဖွားပြီးချိန်ဆိုတာမေမေတို့အတွက် နလန်ထစအချိန်ဖြစ်တဲ့အလျောက် ကောင်းစွာအနားယူပြီး အားအင်ပြန်လည် ဖြည့်တင်းဖို့ လိုအပ်တာကြောင့်ပါ။
မဟုတ်ရင် အင်အားပြတ်လပ်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်လို့ပါ။နို့တိုက်မိခင်တွေမှာဆို….ကလေးပါ အာဟာရချို့တဲ့သွားနိုင်တယ်လေ။သာမန်လူတွေမှာ တစ်ပတ်ကို ၂ပေါင်ချတာ ပုံမှန်ပေမယ့် မေမေတိူ့ကတော့ တစ်ပတ်ကို အများဆုံး ၁ပေါင်ခွဲသာ လျှော့ချသင့်ပါတယ်။ညနေစာမစားတာမျိုး…တစ်နေ့ နှစ်နပ်လောက်ပဲစားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။အစားကို နည်းနည်းစီ ခဏခဏခွဲစားပြီး မနက်စာ နေ့လည်စာ ညစာ သုံးနပ်အပြည့်စားလို့ရပါတယ်။ကြားထဲမှာလည်း အဆီမတက်မယ့် သွားရေစာလေးတွေစားပါ။အကောင်းဆုံးကတော့ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး စနစ်တကျ ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်နော်။
ကျန်းမာလှပတဲ့ မိခင်ဘဝ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Dos and don’ts about body scrub